भिडियो: कसरी तूफानको हावाले मानव शरीरलाई असर गर्दछ? | नेटवर्क मौसम विज्ञान
होमो सेपियन्स यसको उपस्थिति देखि, सधैं अधिक जान्न चाहेको छ। जिज्ञासा हामीसँग जन्म भएको कुरा हो, तर कहिलेकाँही यसले हामीलाई ती चीजहरू गर्न पुर्‍याउँछ जुन एक भन्दा बढी पागल हुन सक्छ। जब यो तूफान वा तूफान जस्तै मौसम घटनामा आउँछ, त्यहाँ कोही छन् जो असम्भव गर्न को लागी हामी जति सक्दो नजिक हुन सकेन.
विशेषज्ञहरु आँधीबेहरी तिनीहरू सुरक्षित रूपमा गर्छन्, र यो गर्नु पर्ने एक मात्र तरिका हो। किन? किन मानव शरीर, सादा र सरल, प्रकृतिको शक्ति विरुद्ध केहि गर्न सक्दैन। यसको एउटा नमूना यो प्रयोग हो जुन मौसमविद् जिम क्यान्टोरले गरे, भिडियोमा रेकर्ड गरियो र मौसम च्यानलको यूट्यूब च्यानलमा अपलोड भयो।
1 तुफानमा बनाम जिम क्यान्टोर
2 तूफान-शक्ति हावाले मानव शरीरलाई कसरी असर गर्छ?
तुफानमा बनाम जिम क्यान्टोर
म समुद्री आँधी मारियाका भिडियोहरूमा एक नजर राख्दै थिएँ जुन मैले यूट्यूबमा अपलोड गरेको थिएँ जब म यो पार गर्दै थिएँ। मेरो पहिलो विचार थियो: "जिम क्यान्टोरले फेरि अद्भुत पागल कामहरू गर्दैछ? यो वाचा "। हो हो, फेरि। मलाई थाहा छैन कि तपाइँ याद गर्नुहुनेछ लेख हामीले २०१ 2015 मा प्रकाशित गरेको एउटा क्यान्टोरले अभिनित गरेको एक भिडियोसहित जो आश्चर्यचकित र खुसी थिए किनकि उसले हिउँको परिदृश्यमा कसरी बिजुली खसेको उसको आफ्नै आँखाले देख्न सकेको थियो, जुन एकदम अनौठो हो। साथै, अब तपाईं पवन सुरुnelमा प्रवेश गर्नुहुन्छ जहाँ तपाईं श्रेणी hur तूफानको नक्कल बलको विरूद्ध लड्नुपर्नेछ.
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यो अझ कममा जान्छ। तपाईंले कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा जान्नको लागि तपाईंले आँधीबेहरी को कोटीहरू के हुन् र उनीहरूको शक्ति के हो भनेर जान्नुपर्दछ:
कोटी ०: हावाको गति ११ and र १119 किमी / घन्टा बीचमा हुन्छ। यसले समुद्री तटमा बाढी आउँछ, र बन्दरगाहमा केही क्षति पुर्‍याउँछ।
कोटी ०: हावाको गति १154 र १177 किमी / घन्टा बीचमा हुन्छ। यसले छत, ढोकाहरू र विन्डोहरूको साथसाथै समुद्री तटका क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याउँछ।
कोटी ०: हावाको वेग १178 र २० k किमी / घन्टा बीचमा हुन्छ। यसले साना भवनहरूमा संरचनात्मक क्षति गर्दछ, विशेष गरी समुद्री तटमा।
कोटी ०: हावाको गति २१० र २210 k किमी / घन्टा बीचमा हुन्छ। यसले सुरक्षा संरचनालाई व्यापक क्षति पुर्‍याउँछ, साना भवनहरूको छत ढल्छ, र समुद्र तटहरू र छतहरू क्षतिग्रस्त हुन्छन्।
कोटी ०: हावाको गति २k० किलोमिटर प्रति घण्टा भन्दा बढी हुन्छ। यसले भवनहरूको छत नष्ट गर्दछ, ठूलो वर्षाले बाढी ल्याउँछ जसले समुद्री तटमा रहेका भवनहरूको तल्लो तलासम्म पुग्न सक्छ, र आवासीय क्षेत्रहरू खाली गर्नु आवश्यक पर्दछ।
तूफान-शक्ति हावाले मानव शरीरलाई कसरी असर गर्छ?
श्रेणी १ को ती पहिले नै पर्याप्त भन्दा बढि छ कि गालको छाला पहिले नै सर्छ र तपाईंलाई तपाईंको सन्तुलन गुमाउँछ। यदि तपाईं सीधा अनुहारमा हिर्काउनु भयो भने, सास फेर्न गाह्रो हुने स्थिति प्राय: महत्वपूर्ण हुन्छ। कल्पना गर्नुहोस् यदि तिनीहरू कोटी wind वारा छन् ... कि बल संग, तिनीहरूले हामीलाई कुनै समस्या बिना उडान गर्न सक्छन्।
र क्यान्टोरले आफूलाई तिनीहरू समक्ष देखा पर्‍यो, र ऊ त्यहाँ छ। एक रेकर्ड प्राप्त गर्न सन्तुष्ट।
महत्वपूर्ण: तपाइँसँग अवसर छ भने पनि, एक चक्रवात नजिक कहिल्यै। आँधीबेहरी वा तुफानको घटनामा तपाईले सुरक्षित स्थानमा सुरक्षा गर्नुपर्दछ, र मौसमको पूर्वानुमानमा हर समय ध्यान दिनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Divulgation » भिडियो: कसरी तूफानको हावाले मानव शरीरलाई असर गर्दछ?